सरकारी अस्पतालहरुको हरिविजोग, नि:शुल्क औषधि,स्वास्थ्य वीमा के होला अब ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
सरकारी अस्पतालहरुको हरिविजोग, नि:शुल्क औषधि,स्वास्थ्य वीमा के होला अब ? (भिडियो)
१. सरकारी अस्पतालहरुको हरिविजोग,निशुल्क औषधि, स्वास्थ्य वीमा के होला अब ?
अहिले धेरै जसो जिल्ला अस्पतालहरु रिफर सेन्टरमा परिणत हुन थालेका छन् । जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालहरुको यो हविगत बन्नुमा संघीय सरकार र स्थानीय तह दोषी देखिएकोमा दुई मत हुन्न पनि । सरकारले अहिले सरकारी अस्पतालबाट धेरै थरीका औषधिहरुको निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ भने उपचारमा पनि विशेष छुटको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
त्यसमाथि स्वास्थ्य वीमाको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बनाउन जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको अवस्थालाई झनै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने टड्कारो देखिएको छ । अझै पनि अपार विश्वास र आशा लिएर आम जनता जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । तर स्थानीय तहको वेवास्था, चिकित्सकहरु नबस्ने पुरानै रोग र अस्पताल व्यवस्थापनको कमी कमजोरीको कारण जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालहरु रिफर सेन्टरमा परिणत हुँदै आएका छन् । पाल्पाको सरकारी अस्पताल यस्को प्रतिनिधि उदाहरण हो तर देशभरका सरकारी अस्पतालको हविगत भने यही छ । के आम जनताको विश्वासको धरोहरलाई जगाउन संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब पनि चासो नदिने ?
२. मानव सेवा आश्रमः वेसहाराहरुको सहारा बन्दै, गरीबहरुका लागि आश्रयस्थल बन्दै
समाजमा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरुको अभाव छैन । नेपाली समाज अझै पनि सहिष्णु , सदभाव र सहयोगको परम्परागत चिनारीबाट पछि हटेको छैन पनि । धेरै कारणहरुले समाजमा अझै पनि अपहेलित , उपेक्षित र उत्पीडितहरुको कमी छैन । मुलुकमा चलेको लामो सशस्त्र द्धन्द्धले समाजका धेरै मान्यताहरु छिया छिया भए , धेरै पुराना मान्यताहरु फेरिए पनि ।
तर त्यही द्धन्द्धले धेरै नेपालीलाई ठूलो चोट र पीडा दियो , जो अहिले पनि समाजमा चहर्याइरहेको पाटो बनेर उभिरहेको छ । द्धन्द्धमा कति अंगभंग भए, कतिको घरबार उजाडियो तर कति आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडामा छट्पटिन पुगे । घाईतेहरुको उपस्थिति समाजमा अहिले पनि बाक्लो छ , सबैलाई सरकार र सरोकारवाला निकायले हेर्न सकेन, जस्को कारण उनीहरु वेसाहारा झै सडकदेखि समाजमा भौतारिरहे ।
तर देशका धेरै शहरहरुमा स्थापित मानव सेवा आश्रम अहिले यस्तै वेसाहाराहरुको सहारा बनेर उभिएको छ , धेरै असहायहरुका लागि सहयोगी हात बनेर उभिएको छ र धेरैलाई पुर्नस्थापित गराएर समाजमा सम्मानको जीवन दिएको छ ।
३. यी उदाहरणीय जनप्रतिनिधि जो अटोरिक्सा चलाएर परिवारप्रतिको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्दैछन्
गर्दा र जाँगर चलाउँदा के हुन्न ? अहिले यस्तै उदाहरण बनेका गुल्मी रेसुङ्गाका अटोरिक्सा चालक बाबुराम नेपाली । धेरै बर्ष विदेशमा पसिना चुहाएर फर्किएका नेपाली रेसुङ्गा नगरपालिकाका कार्यसमिति सदस्य अर्थात जनप्रतिनिधि पनि हुन । उनी गुल्मीको खज्र्याङ्गदेखि चारपाल र घुम्तीसम्म दिनहुँ अटोरिक्सामा यात्रु ओसार पसार गर्छन र नगरपालिकाको वैठक पनि छुटाउदैनन ।
एकातिर जनताप्रतिको जिम्मेवारी अर्कोतिर आफ्नो र परिवारको जिम्मेवारी । बाबुरामले पूरा गर्दै आएको यो दायित्वप्रति अहिले आम गुल्मीवासी नतमस्तक बनेका छन् ।